ဂျူဒိုထဲမှာမှတ်အကောင့်မှဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကိုကာကိုလာ, Yuko, waza-Ari, Ippon ။
အမြင့်ဆုံးရမှတ် ippon ဖြစ်ပါသည်, waza အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော-Ari ဖြစ်ပါသည်, Yuko esch အောက်
အဆိုပါနပန်းသမားများအား၏တဲ့အခါမှာတဦးတည်း Ippon (စင်ကြယ်သောအောင်ပွဲ) ချီးမြှင့်သည်:
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကသူ့နောက်ကျော (င၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း) ရက်တွင်ပြိုင်ဘက်ပစ်;
တစ်ဦး 25 စက္ကန့်ကျော် Judoist ကိုင်သောအခါ,
နာကျင်သို့မဟုတ်အသက်ရှူကျပ် prima ၏ရလဒ်အဖြစ်ဂျူဒိုပြိုင်ဘက်ဟူသောစကားလုံး Maita (လက်နက်ချ) သို့မဟုတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကြိမ်လက်ခြေ claps ညောသောအခါ,
နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အသက်ရှူကျပ် prima တရားသူကြီးတွေထင်ရှား၏အခါရလဒ် (ခန့်ထွက်သယ်ဆောင်သောဝိညာဏ်ဂျူဒို၏ဥပမာအရှုံး) ။
ဂျူဒိုကျောတစ်နိမ့်စိတျအပိုငျးဖို့ပြိုင်ဘက်ပစ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမလုံလောက်သောမှုနှုန်းသို့မဟုတ်အင်အားစုမှာလာသောအခါ (ဆိုလိုသညျ ippon အကဲဖြတ်နှင်းအပ်ခဲ့ပါများအတွက်လိုအပ်သော TPX ဒြပ်စင်နှစ်ခုစာလိပ်ရှိတယ်,
တစ်ဦး 20 စက္ကန့်ကျော်ကိုကိုင် Judoist ပေမယ့်ဒီထက် 25 စက္ကန့်အခါ။
ဂျူဒိုတစ်ခုမလုံလောက်မှုနှုန်းသို့မဟုတ်အင်အားစုမှာကျောတစ်နိမ့်စိတျအပိုငျးဖို့ပြိုင်ဘက်ပစ်တဲ့အခါမှာ (ထိုဆုချီးမြှင့် ippon ၏အကဲဖြတ်များအတွက်လိုအပ်သောလိပ်ထဲမှာလက်ရှိဒြပ်စင်၏ TPX တဦးတည်း;)
တစ်ဦး 15 စက္ကန့်ကျော်ကိုကိုင် Judoist ပေမယ့်ဒီထက် 20 စက္ကန့်အခါ။
ပြစ်ဒဏ်များဒါအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ Passive နှင့် zapreschnnyh စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို၏အကောင်အထည်ဖော်ရန်တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ N.
အလိုအလျှောက်မိမိအပြိုင်ဘက်ရမှတ် Yuko မှချီးမြှင့်ဒုတိယအားကစားသမား CEDAW အောင်ပါ။
တတိယချိုးဖောက်မှုများအတွက်အားကစားသမားသည်သူ၏ပြိုင်ဘက်ရမှတ် waza-Ari မှချီးမြှင့်ခံရကြလိမ့်မည်။
Chetvrtoe ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုချက်ချင်းအဆုံးမှတိုက်ပွဲနှင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ Hansoku-Mackay, စာလုံးစေပါတယ်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုဟာအားကစားသမားမြား၏အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျ။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ဦး ippon ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြစ်ဒဏ် hansoku-Mackay CEDAW ၏ကြိုတင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲတာဝန်ပေးနိုင်ပါတယ် serznye ချိုးဖောက်မှုများသည်။
Иппон — чистая победа — обыкновенно бросок с падением на всю спину
Ваза-ари — "пол-победы" — бросок на часть спины (одну из сторон, бок) — два проведенных Ваза-ари дают победу.
Юко — проведенный прием но не достигший результата — часть бока например.
раньше была еще Кока — но сейчас ее отменили
есть предупреждение Шидо (Сидо) — эквивалент Юко
теперь как считаются очки — побеждает тот кто набрал старшую оценку
например борцы борятся и одному из них дают за уклонение от борьбы Шидо — с этого момента он проигрывает и должен активизироваться, потому что если так все кончится то он проиграл
пусть тот кому дали Шидо провел прием но не полностью и получил оценку Юко — теперь вроде счет равный, но по весу оценка "старше" предупреждения и если бой кончится так то победит получивший оценку!
далее борец с юко провел еще два приема и получил два Юко — о, кажется он выигрывает, но что это — проигрывавший сумел провести четкий хороший бросок и только чудом борцу с кучей оценок удалось увернуться от падения на всю спину — его противник получает оценку Ваза-ари и теперь с этой единственной оценкой он выигрывает, даже если противник еще хоть сколько Юко заработает. .
чтобы сравняться с ним надо тоже заработать Ваза-ари — но тогда уже в счет оценок пойдут Юко и победит тот у кого их больше либо надо бросать "на Ипппон"
သမိုင်းဂျူဒိုကျယ် margin ကဦးဆောင်သည့်တိုက်လေယာဉ်အများအပြား Yuko ပင် waza-Ari ခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အတွင်း Ippon ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာပစ်တယ်နှင့်ရန်ပွဲကိုဆုံးရှုံးရသောအခါအမှုပေါင်းသိတယ်!
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,219 စက္ကန့်ကျော် Generate ။